मनोरंजन Archives - Daily Lokmandu
Apr92019 by Kusum ThapaNo Comments
Dohori Battle2को बिबादपछि मिडियामा गायक जोडिको स्पष्टीकरण,भिडियो हेर्नुहोश्
Dohori Battle 1 को सफलता पछी Dohori Battle2सार्बजनिक गरेर सर्बादिक हिट भएपछी गाएक दोय् प्रकाश सपुत र प्रीती आले मिडियामा आफ्नो अपार सफलता को खुशी साटी रहेका छन् ।आज भएको प्रेस मीट मा उनिहरुले आफुहरुको यो गीत अनि पहिलेको गीत पनि सन्देश मुलक भएको बताएका छन् । आज भएको प्रेस मिटमै प्रकाश सपूत र प्रितिको बिच घम्साघम्सी चलेको थियो ।सकरात्मक सोच सहित आफु हरु अघी बढेको उनिहरुले बताएका छन । रिलिज भएको १ दिन मा नै १० लाख भ्यूज दर्शक हरु बाट पाएकोमा साह्रैनै हर्षित छन् ।
Feb182019 by read colorNo Comments
प्रेम विबाह गरेकाहरुको छिटो डिर्भोस हुनुको पछाडी यस्तो रहेछ मुख्य कारण
एजेन्सी । प्रेम एक पवित्र सम्बन्ध हो । यो सम्बन्धमा सहयात्रा गर्न आउने यात्रीहरु त्यसका पुजारीहरु हुन् । तर सँधै प्रेमले सार्थकता पाउँछ भन्ने पनि छैन । अझ प्रेम विबाह त केही समयपछि धरापमा पर्ने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । हालैको एक अध्ययनले प्रेम विवाह गर्ने ८० प्रतिशत मानिसहरुको सम्बन्ध केही समयपछि धरापमा पर्ने गरेको देखाएको छ । वास्तवमा प्रेम विबाह धरापमा पर्नुको कारण विहे अभिघ र पछिका असमानताहरु नै भएको अध्ययनको दाबी छ । प्रेममा बाँधीएका बेला सबै कुरामा विश्वास गर्ने र बास्तविक जिवनमा ति कुराहरु लागू नहुँदा प्रेमीहरु छिटो आक्रोशित हुने र सम्बन्धलाई पनि तोड्न चाहाने गर्दछन् । अझ आफ्नो प्रेमीको आमाका कारण पनि प्रेमीकाले बढी शर्त राख्ने हुँदा समबन्धले गति लिन नसक्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । विवाह पछि जब पुरुषको असली रुप अगाडि आउँछ तब समस्या बल्झिनथाल्छ ।र पुरुषले पनि इगोका रु
Feb172019 by read colorNo Comments
चर्चित लोकदोहोरी गायक पशुपति शर्माले शुक्रबार युट्यूबमाफर्त सार्वजनिक गरेको नयाँ गीत ‘लुट्न सके लुट कान्छा..’ युट्यूबबाट हटाएका छन् ।‘लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट’ लगायतका व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा नेपालमा बढिरहेको भ्रष्टाचार बेथितिका बारेमा लेखिएको नयाँ गीत उनले युट्यूबबाट हटाएका हुन् । आफूले कुनै पनि राजनीतिक दललाई लक्षित गरेर गीत नल्याएको भए पनि कसैलाई अप्ठेरो परेको भए क्षमा माग्ने पनि गायक शर्माले बताएका छन् । आफूले नेपालमा बढ्दो विसंगति र विकृतिको उजागर मात्रै गर्न खोजेको बताउँदै शर्माले यही गीतलाई परिमार्जन गरेर छिट्टै बजारमा ल्याउने पनि जानकारी दिएका छन् । के भने पशुपतिले ?आदरणीय श्रोता एवं दर्शकवृन्द, साथै मेरा प्यारा शुभचिन्तकज्यूमा सादर नमस्कार । हिजो रिलिज भएको मेरो ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ भन्ने गीतमा यहाँहरुले देखाउनु भएको सहभागिताका लागि हा
Feb152019 by read colorNo Comments
२० फोटोमा हेर्नुहोस् बोल्ड नायिका सुष्मा कार्कीको जन्मदिनको रौनक
काठमाडौं। नायिका सुष्मा कार्कीले भव्य रुपमा जन्मदिन मनाएकी छिन् । बिहीबार भ्यालेन्टाइन डे को दिन जन्मदिन परेकी सुष्माले हरेक बर्षझै जन्मदिन भव्य रुपमा सेलिब्रेशन गरिन् । तर उनी अरु बर्षको बन्दा यो जन्मदिनमा केही फरक देखिइन् । अरु बर्ष छोटो लुगा लगाएर जन्मदिन मनाउने उनी यसपाली भने गाउन लगाएर आएकी थिइन् । उनको जन्मदिनमा नायिका तथा निर्देशक दिपाश्री निरौला, निर्मल शर्मा, निता ढुङ्गाना लगायतका कलाकारहरु उपस्थित थिए । हेर्नुहोस् फोटोहरु –
Feb142019 by read colorNo Comments
रेड कार्पेटमा यस्तो हट र सेक्सी अवतारमा देखा परे बलिउडका हिरोइनहरु, दीपिकाको कपडाको खिल्ली किन उडाइयो ? हेर्नुहोस् तस्बिरहरु
मंगलबार राती फिल्मफेयरको ग्ल्यामर एण्ड स्टाइल अवार्डमा बलिउडका धेरै कलाकारहरु उपस्थित भए । मुम्बइको होटल जे डब्लु मेरिटमा आयोजना गरिएको फिल्मफेयरको ग्ल्यामर एण्ड स्टाइल अवार्ड कार्यक्रममा बलिउडका हिरोइनहरु निकै बोल्ड देखिएका थिए । उक्त कार्यक्रममा बलिउड हिरोइनहरु फरक फरक ड्रेसिङमा देखिए ।
मानिसको स्वभाव नै परिर्वतनशील हुन्छ । उसले फरक–फरक किसिमको आनन्द लिन खोज्छ । फरक यात्रा तथा अनुभव गर्न चाहन्छ । सम्भोगमा पनि यो लागू हुन्छ । सम्भोग कला हो । यसमा विभिन्न आसनको प्रयोग हुन्छ । केही आसन प्राकृतिक छन् । सम्भोग कला कोक शास्त्रका विज्ञले विभिन्न आसनको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । सम्भोगमा ९० भन्दा धेरै आसन छन् । तीमध्ये प्रमुख आसन सम्मुख, कामधेनु, कर्कट, कैंची हुन् । सम्मुख आसनमा महिला तल वा पुरुष तल हुन्छन् । कामधेनु आसनमा महिला घोप्टो पर्ने तथा पुरुषले उठेर गर्ने आसन हो । कर्कट आसनमा महिला र पुरुष दुवै बसेर गरिने आसन हो । कैँची आसनमा महिला सुतेर खुट्टा फटाउने र उठाउने गर्छन् । पुरुषले घुँडा दोब्राउने वा पसार्ने आसन हो । चिकित्सा शास्त्रमा यौन र यौन क्रीडालाई भन्दा सभ्य यौन जीवन र सन्तान उत्पादनमा महत्व दिएको हुन्छ । विभिन्न किसिमका आसनका यौन र यौन क्रीडा मनोरञ्जनका सा
Feb102019 by read colorNo Comments
यी हुन् ५० वर्ष पार गरिसकेका तर अहिले पनि जवान देखिने १३ बलिउड नायक/नायिकाहरु…
आज हामीले आफ्नो जीवनको ५० औं बसन्त पार गरिसकेका तर अहिले पनि जवान र फिट देखिने केहि बलिउड कलाकारहरुका बारेमा रिपोर्ट तयार परेका छौँ । एक आम मानिस ४० वर्ष कटिसकेपछि बुढो देखिन थाल्छ। उसको अनुहार चाउरिन थाल्छ तर, यस्ता थुप्रै सेलिब्रेटीहरु छन् जो ५०/६० वर्षको उमेरमा पनि जवान र फिट देखिन्छन्। अनिल कपुरलाई देखेर कसले भन्छ उनी ६० वर्ष पुगेका एक वृद्ध हुन् भनेर, उनलाई देख्दा हर कोहिले पनि उनको उमेर भन्दा कम्तिमा २० वर्ष कम नै होला भन्ने अनुमान गर्छ। नियमित ब्यायाम, खानपान र स्वस्थ जीवनयापले नै उनीहरु धेरै फुर्तिला र फिट देखिने गर्छन। अनिल कपुर मात्र हैन बलिउड होस् या कलिउडमा यस्ता धेरै कलाकारहरु छन् जो आफ्नो ५० औँ वर्ष पार गर्दा पनि जवान र फिट देखिन्छन्। सलमान खान बलिउडका दबंग सलमान खानले अहिले आफ्नो जीवनको ५२ औँ बसन्त पर गरेर ५३ औं बसन्तमा पाईला टेकेका छन्। तर, उनलाई देखेर लाग्छ
Feb62019 by read colorNo Comments
पहिलो पटक एडल्ट फिल्म हेरेपछि…हिना खानले भनिन्…
एजेन्सी । अभिनेत्री हिना खान आजभोली आफ्नो नायाँ लुक्स र बलिउड डेब्यूका विषयले गर्दा चर्चामा छिन् । उनले एक अन्तर्वार्तामा यत्तिकै पहिलो पटक एडल्ट फिल्म हेर्दाको अनुभव शेयर गरिन् । उनले भनिन्, ‘पहिलो पटक एडल्ट फिल्म हेर्नु मेरो लागि आँखा खोलिदिनु जस्तै भयो ।’ हिनाको लुक आजभोली बदलिएको छ । उनले आफ्नो कपालको लेन्थ शर्ट बनाएकी छन् र हेयर कलर पनि गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा हिनाले आफ्नो न्यू लूकको भिडियो शेयर गरेकी छन् । हालै हिनाले कश्मीरको मनोरम वातावरणमा आफ्नो पहिलो फिल्मको शूटिंग गरेकी छन् । उनी टिभी र फिल्ममा आफ्नो उपस्थिति देखाउँ गइरहेकी छन् । फिल्मका विषयमा बोल्दै हिनाले भनिन्, ‘यो महिला केन्द्रित फिल्म हो, यसलाई एक विशेष समय र विषेश स्थानमा केन्द्रित गरिएको छ ।’ हिना आजभोली स्टार टेलिभजनमा प्रशारण भइरहेको कसौटी जिन्दगिकी २ मा कोमोलिकाको नेगेटिभ भूमिकामा छिन् । उनी कुनै कामम
शारीरिक सम्बन्ध राख्दा बच्चा हुन्छ भन्ने थाहा नै नपाई ११ वर्षमा नै आमा बनिन् भावना, नन्दले… (3)
अबिबाहित युवती बनेर प्रेमीसँग बिहे गर्न आमाले गरिन आफ्नै छोराको हत्या … (पुरा विवरण हेरी… (3)
साबधान ! आमा-बुबाको यस्तो सानो गल्तिले नै “तेस्रो लिङगी”जन्मिनछन्!! (36)
कण्डम बिना नै बच्चा नबस्नेगरी कसरी शारिरिक सम्पर्क गर्ने ? यस्तो छ डा. नुतनको सल्लाह (28)